သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက် - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > ကျမ်းစာပရောဖက်ပြု
ပရောဖက်ပြုချက်သည် လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၏ ရွေးနုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို နောင်တရခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ကြောင်း ကြေငြာထားသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည် ဘုရားသခင်အား အနန္တတန်ခိုးရှင် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် တရားသူကြီးအဖြစ် ကြွေးကြော်ထားပြီး လူသားများကို သူ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကျေးဇူးတော်နှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုတို့ကို အာမခံပြီး ယုံကြည်သူအား ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားတရားရှိစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ (ဟေရှာယ ၄6,9စာ-၁၁; လုကာ ၂4,44စာ-၄၈; ဒံယေလ 4,17; ယုဒ ၁၄-၁၅; 2. ဓာတ်ဆီ 3,14)
ခရစ်ယာန်များစွာသည်ပရောဖက်ပြုချက်များကိုမှန်ကန်သောရှုထောင့်မှကြည့်ရှုနိုင်ရန်အထက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုချက်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခရစ်ယာန်များစွာသည်ပရောဖက်ပြုချက်ကိုအလွန်အမင်းအလေးထားပြီးခိုင်လုံသောအကြောင်းမရှိဟုပြောဆိုကြသည်။ အချို့သူများအတွက်ပရောဖက်ပြုချက်သည်အရေးအကြီးဆုံးသောdoဝါဒဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ကျမ်းစာလေ့လာမှု၏အများဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီးယင်းကိုသူတို့အများဆုံးကြားလိုသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အာမဂေဒုန်ဝတ္ထုများသည်ကောင်းစွာရောင်းကြသည်။ ခရစ်ယာန်များစွာသည်သမ္မာကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်များဘာပြောထားသည်ကိုသိသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြချက်တွင် ၀ ါကျသုံးခုရှိသည်။ ပထမကပရောဖက်ပြုချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ဖွင့်ပြသည့်အရာဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ၎င်းသည်သူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည်အဘယ်သို့အလိုရှိသည်၊
ဒုတိယဝါကျတွင်သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်တိုင်းသည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာသည်ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်အချို့သည်ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်သို့မဟုတ်ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည်ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဖော်ပြသောနည်းလမ်းများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်သည်ယေရှုခရစ်ကိုအဓိကထားသောကြောင့်ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုဖွင့်ပြခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပရောဖက်ပြုချက်သည်ယေရှုခရစ်နှင့်ယေရှုမှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်နေရာများနှင့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်။ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်မှာမလွဲisကန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီမှာပရောဖက်ပြုချက်တိုင်းကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူး - ငါတို့မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေညာချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်တည်ရှိမှုကိုအဘယ်ကြောင့်ကောင်းစွာရှုမြင်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြချက်သည်အနာဂတ္တိကျမ်းအများစုသည်အနာဂတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်အချို့သောလူများကိုသာအာရုံစိုက်သည်ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုဆန့်ကျင်သည်။ အနာဂတ္တိကျမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာလူများနှင့်အနာဂတ်အတွက်မဟုတ်ဘဲနောင်တ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊
ဂိုဏ်းဂဏများစွာတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူပါကပရောဖက်ပြုချက်သည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုလူအများကပြောနိုင်မလားကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ သူမသည်သူမသည်အခြားအရာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော်ပရောဖက်ပြုချက်သည်ယေရှုခရစ်မှတစ်ဆင့်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်အခြားသောအရာများဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့သည်ကမ္ဘာ၏နိဂုံးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကိုကြည့်သောအခါ၊ သန်းနှင့်ချီသောသူတို့သည်အနာဂတ္တိအနာဂတ္တိများကိုအနာဂတ်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောအခါပရောဖက်ပြုချက်၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်ကိုလူတို့အားသတိပေးသည်။ ယေရှုခရစ်၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဖြင့်လူတို့၏အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေညာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သောအရာအချို့ပြောချင်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာလူသားအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ လူ့အပြစ်များကိုမဖော်ပြထားပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားတို့၏အခြေခံအခြေအနေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်၏တစ် ဦး ချင်းစီရလဒ်များမျှသာမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းအပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားသဘာ ၀ ဖြစ်သောပြproblemနာ၏ရင်းမြစ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ရန် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ မည်သည့်အပြစ်အတွက်နောင်တရရန်အချိန်နှင့်ဥာဏ်ပညာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းအားလုံးကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းအစား၎င်းသည်ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသည်။ ထိုအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်နှင့်သဘောသဘာဝကိုအခြေခံပြီးအပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။
ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်နောင်တတရားအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်နောင်တယူခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့သည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟုအပြုသဘောဆောင်သောအာမခံချက်ပေးလိုပါသည်။ ၎င်းသည်ပရောဖက်ပြုချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်နောင်တသည်တူညီသောဒင်္ဂါးနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ချက်သည်ယုတ္တိဗေဒတွင်ပထမနေရာ၌ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲလိုက်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောနောင်တမျိုးမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူနောင်တယူခြင်းသာကယ်တင်ခြင်းအတွက်ထိရောက်သောသည်။ ယုံကြည်ခြင်းကို ဦး စားထားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရန်လိုသည်ဟုမကြာခဏပြောတတ်ကြသည်။ မှန်ပါသည်၊ သို့သော်ဤဝါကျကသူ၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သူ့ကိုယုံကြည်ရုံတင်မကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်သူလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းယုံကြည်တယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သာမကသူ၏လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်သူကျူးလွန်ခဲ့သောအရာလည်းဖြစ်သည်။
ဤကြေညာချက်တွင်သူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မဖော်ပြပါ။ ယေရှုခရစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြချက်မှာသူသည်“ ငါတို့အပြစ်များအတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူခြင်း” ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။
ဘာသာရေးအရပြောရရင်လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရုံနဲ့ခွင့်လွှတ်ခံရနိုင်တယ်။ ခရစ်တော်ကငါတို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတိကျတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲ။ လိုအပ်သောခရစ်တော်၏အပြစ်ဖြေခြင်းအကြောင်းသီအိုရီမရှိပါ။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောဖျန်ဖြေသူအဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးယုံကြည်မှုများမရှိပါ။ သို့သော်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ခရစ်တော်သည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ထိရောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအခါခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးကယ်တင်ရှင်နှင့်သခင်အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လက်ခံပြီးသူ၏အံ့ဖွယ်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပရောဖက်ပြုချက်သည် ကယ်တင်ခြင်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေခံချက်အဆုံးတွင် ကိုးကားထားသောကျမ်းစာများတွင် ယင်းကိုတွေ့ရှိရသည်—လုကာ ၂4. ထိုတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ယေရှုသည် ဧမောက်မြို့သို့သွားရာလမ်း၌ တပည့်နှစ်ယောက်အား အကြောင်းအရာအနည်းငယ်ကို ရှင်းပြတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခန်းငယ် 44 မှ 48 ကိုကိုးကားသော်လည်း၊ အခန်းငယ် 25 မှ 27 ကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်သည် - "အိုလူမိုက်တို့၊ ပရောဖက်များပြောသမျှကိုယုံကြည်ရန်စိတ်ပျက်လွန်းလှသည်။ ခရစ်တော်သည် ဤဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံပြီး သူ၏ဘုန်းအသရေသို့ဝင်ရမည် မဟုတ်လော။ မောရှေနှင့် ပရောဖက်အပေါင်းတို့နှင့် စ၍ကျမ်းစာရှိသမျှတို့၌ ကိုယ်တော်၏အကြောင်းကို ရှင်းပြတော်မူသည်” (လုကာ ၂၊4,25-27) ။
ကျမ်းစာကသူ့အကြောင်းသာဖော်ပြထားသည်သို့မဟုတ်ပရောဖက်ပြုချက်တိုင်းသည်သူ့အကြောင်းဖြစ်သည်ဟုယေရှုမပြောခဲ့ပါ။ သူသည်ဓမ်မဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းရန်အချိန်မရှိခဲ့ပါ။ အချို့သောပရောဖက်ပြုချက်များသည်သူ့အကြောင်းနှင့်အချို့သည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ သွယ်ဝိုက်။ သာဖြစ်သည်။ ယေရှုကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ တပည့်တော်များသည်ပရောဖက်များရေးသားခဲ့သည့်အရာများအကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့သော်လည်းအရာရာတိုင်းကိုယုံကြည်ရန်နှေးကွေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာဇာတ်လမ်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုလွဲချော်သွားပြီးယေရှုကကွက်လပ်တွေကိုဖြည့်ပြီးသူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ yr ဒုံ၊ မောဘ၊ အာရှုရိသို့မဟုတ်အီဂျစ်နှင့်အချို့သောIsraelသရေလလူမျိုးနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်အချို့သည်Israelသရေလလူမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများမှာမေရှိယ၏ဆင်းရဲခြင်းနှင့်သေခြင်းအကြောင်း၊ ယေရှုကလည်း၊
ယေရှုသည်မောရှေ၏ကျမ်းနှင့်အစပြုခဲ့သည်ကိုလည်းသတိပြုပါ။ ၎င်းတို့တွင်မေရှိယဆိုင်ရာပရောဖက်ပြုချက်အချို့ပါရှိသည်၊ သို့သော်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့အများစုသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည် - မေရှိယ၏အလုပ်ကိုပရောဖက်ပြုသောစာစီစာကုံး၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဓလေ့ထုံးစံများဖြစ်သည်။ ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းယေရှုရှင်းပြခဲ့တယ်။
အခန်းငယ် 44 မှ 48 တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်ဆင့်ပြောပါ– “တဖန်တုံမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါကဤစကားဟူမူကား၊ မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌၊ ပရောဖက်များအားဖြင့်၊ ငါ့အကြောင်းရေးထားသမျှတို့သည် ပြည့်စုံရကြမည်။ ဆာလံကျမ်း» (း၄၄)။ တစ်ဖန် သူသည် သူ့အကြောင်း အသေးစိတ်ကို မပြောခဲ့ပေ။ သူပြောခဲ့တာက သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အရာအားလုံး ပြည့်စုံဖို့ မလိုဘူးလို့ ထပ်ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အချို့သောပရောဖက်ပြုချက်များသည် သူ၏ဒုတိယကြွလာခြင်းကို အနာဂတ်ကိုညွှန်ပြနေပုံရသော်လည်း သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ပြည့်စုံရမည်ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည် သူ့ကိုညွှန်ပြသည်သာမက၊ ပညတ်တရားသည်လည်း သူ့ကိုညွှန်ပြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သူလုပ်ဆောင်မည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် ၄၅-၄၈–“ ထိုအခါကျမ်းစာကိုနားလည်စေခြင်းငှါတပည့်တော်တို့၏ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျှင်၊ ခရစ်တော်သည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်ရမည်။ ခရစ်တော်၏နာမအားဖြင့်နောင်တတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဟောပြောသောအားဖြင့်၊ သင်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ စ၍ ဤမည်သောသက်သေကိုခံလော့။ ဤတွင်ယေရှုကသူ့ကိုသက်ဆိုင်သောပရောဖက်ပြုချက်အချို့ကိုရှင်းပြသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်မေရှိယ၏ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်သာမကအနာဂတ္တိကျမ်းသည်နောင်တနှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းသတင်းကိုပြည်သူအားလုံးဟောမည့်သတင်းကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။
ပရောဖက်ပြုချက်သည်မတူညီသောအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာမေရှိယအသေခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် purpose မောက်ရွာသို့သွားသောလမ်း၌ဤပရောဖက်ပြုချက်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအလေးအနက်ပြုခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဖက်ပြုချက်တွင်ဤပရောဖက်ပြုချက်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးထားဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျမ်းပိုဒ်၏ဤအပိုင်းကိုလက်လွတ်မခံရန်သေချာစေသင့်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျ၏ဤအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နားမလည်ပါကအခြားမည်သည့်အရာကမျှကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဗျာ၊ ၁9,10 “ယေရှု၏သက်သေခံချက်ကား ပရောဖက်ပြုချက်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်” ယေရှုနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းစကားသည် ပရောဖက်ပြုချက်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးက ဒီအကြောင်းပါ။ ပရောဖက်ပြုချက်၏အနှစ်သာရမှာ ယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယဝါကျတွင်အနာဂတ္တိနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုဖော်ပြထားသည်။ သူက“ ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရားသခင်ကိုအနန္တတန်ခိုးရှင်ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်တရားသူကြီးအဖြစ်အရာခပ်သိမ်းကိုကြေငြာပြီးလူသား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိမှုကိုအာမခံသည်။ ယုံကြည်သူများအားယေရှုခရစ်၌ဘုရားရေးရာအသက်တာဖြင့်နေထိုင်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။ ” ဤတွင်ပရောဖက်ပြုချက်၏အခြားရည်ရွယ်ချက်သုံးခုရှိသည်။ ပထမအချက်ကဘုရားသခင်သည်အရာအားလုံးကိုအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တရားသူကြီးဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဒုတိယ၊ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်း၊ ကရုဏာနှင့်သစ္စာရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ တတိယ၊ ပရောဖက်ပြုချက်ကကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်စွာနေထိုင်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်သုံးခုကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က ဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးရှင်ဖြစ်ပြီး အရာခပ်သိမ်းကို အုပ်စိုးသောအခွင့်အာဏာရှိတော်မူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသည်။ ဟေရှာယ ၄ ကို ကိုးကားပါသည်။6,9အမှတ်-၁၁၊ ဤအချက်ကို ထောက်ခံသော ကျမ်းပိုဒ်၊ “ရှေးခေတ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ငါက ဘုရားသခင်ပဲ၊ တခြားဘယ်သူမှ မရှိဘူး၊ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ဘုရားသခင်ပါ။ အစကတည်း က နောက်လာမယ် နဲ့ မဖြစ်သေး တာ တွေ ကို ကြေငြာ ခဲ့တယ် ။ ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ၊ ငါဆုံးဖြတ်ပြီးသမျှ ငါလုပ်မယ်။ ငါ့အကြံကို ဆောင်သောသူကို အရှေ့အရပ်၊ ဝေးသောပြည်မှ လင်းတကို ငါခေါ်၏။ ငါပြောသည်အတိုင်း၊ ငါ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ငါလည်း လုပ်တယ်။"
ဤအပိုင်း၌ဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းသည်မည်သို့စတင်မည်၊ မည်သို့စတင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ အရာရာတိုင်းဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်အစမှအဆုံးကိုပြောရန်မခက်ခဲပါ၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သာလျှင်အဆုံးကိုအစမှကြေညာနိုင်သည်။ သူသည်ရှေးအချိန်ကပင်အနာဂတ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သည်။
လူအချို့ကဘုရားသခင်သည်အနာဂတ်ကိုမြင်သောကြောင့်ဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်အနာဂတ်ကိုမြင်နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်ဟေရှာယရည်ရွယ်သောအချက်တော့မဟုတ်ပါ။ သူအလေးထားပြောတာကဘုရားသခင်ဟာကြိုတင်အသိအမှတ်ပြုတာလောက်သာမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်မှုသေချာစေရန်သမိုင်းတွင်ဘုရားသခင်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကဒီကိစ္စမှာသူအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အရှေ့လူတစ်ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်ရင်တောင်အဲဒီအကြောင်းယူမယ်။
ဘုရားသခင်သည်သူ၏အကြံအစည်များကိုကြိုတင်ကြေငြာခဲ့ပြီး၊ ဤဖွင့်ဟချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသောအရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖွင့်ပြခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်၊ အစီအစဉ်နှင့်အလိုဆန္ဒဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုဖြစ်ပျက်စေရန်သေချာစေသည်။ သူလုပ်ချင်တာဘာလုပ်မလဲ၊ သူလုပ်ချင်တာဘာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ကိုယ်တော်သည်လူမျိုးအားလုံးအပေါ်အချုပ်အခြာအာဏာရှင်ဖြစ်သည်။
ဒံယလေက 4,17စာ-၂၄ က အတူတူပါပဲ။ နေဗုခဒ်နေဇာသည် ခုနစ်နှစ်ကြာ ဘုရင်စိတ်ပျက်မည်ဟု ဒံယေလ ကြေညာပြီးနောက် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဖြစ်ပျက်သွားသည်– “အကျွန်ုပ်အရှင်မင်းကြီး၏ အကြံအစည်တော်သည် အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ အကြံအစည်ဖြစ်သည်၊ တောတိရစ္ဆာန်တို့နှင့် အတူနေ၍ မြက်ကို ကျွဲနွားကဲ့သို့ စားစေသဖြင့်၊ မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ လဲလျောင်း၍ စိုစွတ်သော တန်ခိုးရှိတော်မူကြောင်းကို မသိမီ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် လွန်သွားလိမ့်မည်။ လူတို့၏နိုင်ငံတို့ကို အုပ်စိုး၍ အလိုရှိတော်မူသောသူတို့အား ပေးတော်မူ၏။” (ဒံယေလ၊ 4,21-22) ။
သို့ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်လူမျိုးအားလုံးတို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းလူအများသိစေရန်ပရောဖက်ပြုချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သူ၌လူတစ် ဦး ကိုအုပ်စိုးသူအဖြစ်အသုံးပြုရန်တန်ခိုးရှိပြီးလူတို့တွင်နိမ့်ကျသည်။ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏အချုပ်အခြာအာဏာဖြစ်သောကြောင့်မိမိအားပေးလိုသူအားကြီးစိုးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်မှတစ်ဆင့်သိရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၌တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိကြောင်းပြသသည်။
ဘုရားသခင်ကတရားသူကြီးဖြစ်တယ်လို့ပရောဖက်ပြုချက်ကဆိုတယ်။ ၎င်းကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှအထူးသဖြင့်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ လူတွေမကောင်းတာလုပ်လို့ဘုရားသခင်ကမနှစ်မြို့စရာတွေပေးတယ်။ ဘုရားသခင်သည်ဆု ချ၍ အပြစ်ပေးနိုင်သောအခွင့်အာဏာ ရှိ၍ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်တရားသူကြီးတစ် ဦး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ယုဒ ၁၄-၁၅ ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားသည် -“ och နောက်သည်အာဒံမှဆင်း သက်၍ ခုနှစ်ဆက်မြောက်သောစကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည်ခပ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ။ ၊ ဘုရားတရားမဲ့သောအပြစ်သားများကသူ့ကိုဆန့်ကျင်ကဲ့ရဲ့သောမတရားသောအပြုအမူများ၊
ဤတွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ဓမ္မဟောင်းတွင် မတွေ့ရှိရသော ပရောဖက်ပြုချက်ကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ဤပရောဖက်ပြုချက်သည် apocryphal စာအုပ်တွင်ဖြစ်သည်။ 1. ဧနောက်သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် ပရောဖက်ပြုချက်ဖော်ပြသည့် မှုတ်သွင်းခံမှတ်တမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သခင်သည် ကြွလာတော်မူသည်--- အနာဂတ်၌ ရှိဆဲဖြစ်သည်--၊ လူတိုင်း၏ တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့်သစ္စာရှိကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်ကမည်သည့်နေရာတွင်ဖော်ပြထားသနည်း။ အနာဂတ္တိကျမ်း၌အဘယ်မှာထင်ရှားသနည်း။ ဘုရားသခင့်အကျင့်စရိုက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ဟောကိန်းများမလိုအပ်ပါ။ ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်နှင့်အပြုအမူများအကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်သူ၏စရိုက်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြခြင်းမှာမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ သူ၏အစီအစဉ်များနှင့်အစီအစဉ်များကသူသည်ချစ်ခြင်း၊ ကရုဏာနှင့်သစ္စာရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားမလွှဲမရှောင်ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာ ယေရမိ ၂ ကို တွေးနေတယ်။6,13“ဒါကြောင့် မင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကို မြှင့်တင်ပြီး မင်းရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရဲ့ အမိန့်တော်ကို နာခံလိုက်ပါ၊ သခင်ဘုရားက မင်းအပေါ်ထားတဲ့ မကောင်းမှုတွေအတွက် နောင်တရလိမ့်မယ်။” လူတို့သည် ပြောင်းလဲသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ပေးသနားတော်မူလိမ့်မည်။ အပြစ်ပေးလိုသောစိတ်မရှိ၊ အသစ်စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အာဃာတတွေ မထားတတ်ဘူး။ သနားကြင်နာတတ်ပြီး ခွင့်လွှတ်လိုစိတ်ရှိတယ်။
သူ၏သစ္စာစောင့်သိမှု၏ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဖက်ပြုချက်ကို ကြည့်ပါ။ 3. မောရှေ ၁6,44 ကြည့်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ပဋိညာဉ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက ၎င်းတို့သည် ရှုံးနိမ့်ပြီး သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးအား သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအာမခံချက်ကို ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်– “သူတို့သည် ရန်သူ၏နိုင်ငံ၌ရှိလျှင်ပင် ငါမငြင်းဆိုသေးဘဲ၊ ၎င်းတို့နှင့် ပြီးဆုံးသွားစေရန် ငါသည် ၎င်းတို့ကို ရွံရှာခြင်းမရှိပါ။ ဤပရောဖက်ပြုချက်သည် ဤတိကျသောစကားလုံးများကို အသုံးမပြုသည့်တိုင် ဘုရားသခင်၏သစ္စာ၊ ကရုဏာနှင့် ချစ်ခြင်းကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။
ဟောရှေ ၁၁ သည်ဘုရားသခင့်သစ္စာရှိမေတ္တာ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သစ္စာမဲ့Israelသရေလလူမျိုးမည်မျှရှိသည်ကိုဖော်ပြပြီးသည့်တိုင်အခန်းငယ် ၈-၉ ၌ဤသို့ဆိုထားသည် -“ ငါ့စိတ်နှလုံးသည်ကွဲပြား၏။ ငါသနားခြင်းကရုဏာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်၏။ ပြင်းစွာအမျက် ထွက်၍ ru ဖရိမ်ကိုအထပ်ထပ်မဖျက်ဆီးလို။ ငါသည်လူမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ သင်တို့တွင်သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်၏။ ဒီပရောဖက်ပြုချက်ကဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်ကိုအမြဲချစ်မြတ်နိုးကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းပရောဖက်ပြုချက်များကဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့်သစ္စာရှိကြောင်းကိုလည်းအာမခံထားသည်။ သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်အတူနေထိုင်ပြီးကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထာဝရခံစားရမည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကဘုရားသခင်သည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းအာမခံသည်။ အတိတ်ကကြိုတင်ပရောဖက်ပြုချက်များသည်သူ၌လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသူရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုအာမခံသည်။
နောက်ဆုံး၌ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်သည်ယုံကြည်သူများအားခရစ်တော်ယေရှု၌ဘုရားရေးရာအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုဖော်ပြချက်ကဖော်ပြသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဥပမာ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံလှည့်စားရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အကြောင်းမှာသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုလိုလားကြောင်းစိတ်ချယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူကမ်းလှမ်းသည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသောအခါကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းရရှိလိမ့်မည်။ ငါတို့မကျင့်ဘူး
ဤအကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားပါသည်။ 2. ဓာတ်ဆီ 3,1214 သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည် သူခိုးကဲ့သို့လာလိမ့်မည်။ မိုဃ်းကောင်းကင်သည် ကြီးစွာသော ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဒြပ်စင်များမူကား အပူမှ အရည်ပျော်၍ မြေကြီးနှင့် မြေကြီးနှင့် ပတ်သက်သော အရာများကို တရားစီရင်ခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ အခု ဒီအရာတွေ အားလုံး ပြေပျောက်သွားရင် မြတ်စွာဘုရား လမ်းလျှောက်ပြီး ဘုရားတရားနဲ့ ဘယ်လို ရပ်တည်ရမှာလဲ။”
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်ကိုကြောက်ရွံ့မည့်အစားမျှော်လင့်သင့်ပြီးဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်သောအသက်တာဖြင့်နေထိုင်သင့်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လျှင်ငါတို့ပြုလျှင်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်မည်, ငါတို့မပြုလျှင်လျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်အရာတစ်ခုခု။ ဘုရားသခင်ကိုသစ္စာရှိစွာရှာဖွေသူများကိုဘုရားသခင်ဆုချကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ဟသောကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဘ ၀ ကိုရှင်သန်နေထိုင်ရန်ပရောဖက်ပြုချက်ကတိုက်တွန်းထားသည်။
အခန်းငယ် ၁၂-၁၅ တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ဖတ်ရသည် -“ …ကောင်းကင်နေ့တို့သည်မိုwith်းကောင်းကင်၌မီးကဲ့သို့၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတည်နေရာမိုhis်းကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်အညီမြော်လင့်ကြ၏။ ထိုကြောင့်ငါချစ်သောညီပေါလုသည်၊ သင်တို့အားရေး။ ပေးလိုက်သောပညာစကားအားဖြင့်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုပိုင်ရစေခြင်းငှါခန့်ထားတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ကြီးလှစွတကား။ ။ "
ဤကျမ်းချက်ကသမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကကျွန်ုပ်တို့အားပြုမူဆောင်ရွက်ရန်၊ မှန်ကန်စွာတွေးတောရန်၊ ဘုရားရေးရာအသက်တာ၌နေထိုင်ရန်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်အားစိုက်ထုတ်ရန်အားပေးထားသည်ကိုပြသည်။ ဤသို့ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအထူးသဖြင့်ကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်သည်စိတ်ရှည်ခြင်း၊
ဤတွင်ယေရှု၏အခန်းကဏ္ ongoing သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာယေရှုသည်ခမည်းတော်၏လက်ျာတော်ဘက်၌ထိုင်။ ၊ မောရှေပညတ်သည်ယေရှု၏ရွေးနုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ဤအသွင်အပြင်ကိုရှေ့ပြေးပုံဖော်။ ဟောခဲ့သည်; ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်သောဘ ၀ ကိုရှင်သန်ရန်၊ ကိုယ်တော်ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်ကိုအာမခံနိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
ပရောဖက်ပြုချက်ကဘုရားသခင့်ကရုဏာတော်နှင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည့်အကြောင်းအာမခံသည်။ ပရောဖက်ပြုခြင်းကဘုရားသခင်နှစ်သက်သောဘ ၀ ကိုအသက်ရှင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးမှုသည်မှန်ကန်စွာနေထိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်တွင်ကောင်းသောအပြုအမူအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ အတိတ်ကာလ၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားကောင်းမြတ်တော်မူပြီး၊ သူပြုလုပ်ခဲ့ရာများကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သောကြောင့်၊ သူပြောသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်လိုကြသည်။ ဖြောင့်မတ်စွာနေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုမူသည့်အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူနှစ်သက်စေလိုသည်။ ထို့အပြင်အနာဂတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်ရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိပေးသည်၊ အကြောင်းမှာသူကဤသတိပေးချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်ပေးလိုခြင်းကြောင့်တည်း။ သူတို့လည်းငါတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဆုတွေလည်းပေးမယ်လို့လည်းကတိပေးခဲ့တယ်။ သူပေးသောဆုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိုကြသည်။
အပြုအမူသည်ပရောဖက်ပြုချက်အတွက်အမြဲတမ်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်ခန့်မှန်းခြင်းမျှသာမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုဖော်ပြရန်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ္တိကျမ်းအတော်များများသည်အခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။ ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးခြင်းကိုသတိပေးခဲ့ပြီးနောင်တရရန်မျှော်လင့်သည်။ အနာဂတ္တိအနာဂတ္တိကျမ်းအနာဂတ်ကိုအသေးအဖွဲအဖြစ်ပေးထားကြသည်မဟုတ် - သူတို့ပစ္စုပ္ပန်များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇာခရိသည် ပြောင်းလဲခြင်းတောင်းဆိုချက်အဖြစ် ပရောဖက်များ၏သတင်းစကားကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်– “ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်၏မကောင်းသောအကျင့်ကို ရှောင်လွှဲလော့။ သူတို့သည် နားမထောင်ဘဲ ငါ့ကို ဂရုမစိုက်ကြဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။” (ဇာခရိ၊ 1,3စာ-၄)။ ပရောဖက်ပြုချက်က ဘုရားသခင်သည် သနားညှာတာသောတရားသူကြီးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင်ယေရှုလုပ်ဆောင်သောအရာကိုအခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုယုံကြည်ပါက ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။
အချို့သောအနာဂတ္တိများသည်ကြာရှည်သောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ လူများသည်ကောင်းမကောင်းပြုသည်ကိုမူမမှီ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ ပရောဖက်ပြုချက်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိလာပြီးပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးသည်အဘယ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ်မှ လွဲ၍ ပြောရန်ခက်ခဲသနည်း။ တချို့ကဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်, အချို့သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏အဘယ်အရာကိုငါတို့မသေချာအချို့ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်ခြင်းကြေငြာရန်ကြိုးစားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောကြောင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ပြုလုပ်သောအရေးကြီးဆုံးသောအရာကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိပေးသည်